သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားအတွက် ဘယ်လိုဂါဝန်လေးတွေ ရွေးချယ်မလဲ? - Lifestyle Myanmar
Home Fashion သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားအတွက် ဘယ်လိုဂါဝန်လေးတွေ ရွေးချယ်မလဲ?
သင့်ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားအတွက် ဘယ်လိုဂါဝန်လေးတွေ ရွေးချယ်မလဲ?
လူတစ်ယောက်နဲ့ တစ်ယောက်က ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချင်း မတူကြပါဘူး။ ခန္ဓာကိုယ်ဖွဲ့စည်းတည်ဆောက်ပုံချင်း မတူကြတာကြောင့် သူများနဲ့ကြည့်ကောင်းနေတဲ့ဝတ်စုံဟာ ကိုယ်နဲ့လိုက်ဖက်ချင်မှ လိုက်ဖက်တာပါ။ ခန္ဓာကိုယ်ပုံစံက အမျိုးအစား ၅မျိုးတောင်ရှိတာကြောင့် Stylist တွေ လမ်းညွန်ထားတဲ့ ကိုယ်ခန္ဓာအမျိုးအစားပေါ်မှုတည်ပြီး ဘယ်လိုဂါဝန်လေးတွေကို အသင့်တော်ဆုံး ရွေးချယ်ဆင်မြန်း လို့ရသလဲဆိုတာကို မျှဝေပေးလိုက်ပါတယ်။
သဲနာရီပုံခန္ဓာကိုယ်ကောက်ကြောင်းကို အမျိုးသမီးတိုင်းက နှစ်သက်ကြပါတယ်။ ဒီအမျိုးအစားက တင်ပါးနှင့်ပခုံးအကျယ်တူပြီး ခါးသေးသွယ်ပါတယ်။ခန္ဓာကိုယ်အချိုးအစား မျှမျှတတဖြစ်ပါတယ်။ အဆိုပါ သဲနာရီပုံသဏ္ဍာန်အတွက် ဘယ်အဝတ်အစားနဲ့မဆိုလိုက်ဖက်တာကြောင့် ကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ ဂါဝန်ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။
တြိဂံပြောင်းပြန်ပုံရှိတဲ့ ခန္ဓာကိုယ်အမျိုးအစားနှင့် မိန်းကလေးတွေဟာ ပခုံးကျယ်ကျယ်နဲ့ တင်ပါးကျဉ်းတဲ့ သွင်ပြင်လက္ခဏာ ရှိပါတယ်။ ဒီပုံပန်းသဏ္ဍာန်ကို ထိန်းညှိဖို့ သင့်အပေါ်ပိုင်းအရွယ်အစားကို စဉ်းစားပါ။ အပေါ်ပိုင်းကြီးရင် ဂါဝန်ရဲ့အရောင်က အောက်ပိုင်းထက် အပေါ်ပိုင်းနေရာမှာ ပိုရင့်သင့်ပါတယ်။ အကောာင်းဆုံးစတိုင်ကတော့ အပေါ်ပိုင်းကျဉ်းပြီး ခါးနေရာကနေ ကားသွားတဲ့ ဂါဝန်လေးတွေနဲ့သင့်တော်ပါတယ်။ ခါးစပ်မှာ အတွန့်ပါတဲ့ tulip စကတ်လေးတွေ၊ ဘာဂျာခေါက်အတွန့်စကတ်လေးတွေ၊ စကတ်ဝဲဝဲလေးတွေ ဝတ်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ တင်ပါးနားမှာ အတွန့်လေးတွေ၊ ဖဲပြားလို accessories ထည့်ထားတာတွေ၊ ခပ်ပွပွလေးတွေက တင်ပါးကျဉ်းတာကို ဖုံးကွယ်ပေးပါတယ်။ သင့်အပေါ်ပိုင်းနှင့် တင်ပါးအတိုင်းအတာတွေက သေးငယ်လျှင် တစ်ဆက်တည်းဂါဝန်၊ သို့မဟုတ် အောက်ပိုင်းကားသွားတဲ့ ပြောင်ဂါဝန်လေးတွေကို ဝတ်ဆင်ပေးနိုင်ပါတယ်။
ပန်းသီးပုံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ခြေထောက်သွယ်သွယ်နဲ့ ပခုံးနဲ့ တင်ပါးကအရွယ်အစားတူ ကျဉ်းတဲ့ပုံရှိပါတယ်။ ခန္ဓာကိုယ်အလယ်ပိုင်းပြည့်တဲ့ပုံမျိုးပါ။ ဒီပုံသဏ္ဍန်ကို ထိန်းညှိရမယ့် အဓိကနည်းလမ်းက အပြားကြီးကြီးခါးပတ် ဒါမှမဟုတ် ကော့ဆတ် ဝတ်ဆင်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ သင့်လျော်တဲ့ ဂါဝန်စတိုင်တွေအဖြစ် အောက်ပိုင်းကားတဲ့ ဂါဝန်လေးတွေ၊ ဂါဝန်အထပ်ထပ်လေးတွေ၊ တဆက်တည်းဂါဝန်၊ Pencil ဂါဝန်၊ ဗီလည်ပင်းပုံဂါဝန်လေးတွေက ဒီခန္ဓာကိုယ်ပုံစံကို ထိန်းညှိဖို့ ကူညီပေးပါလိမ့်မယ်။
လေးထောင့်ပုံသဏ္ဍာန်ကိုယ်ကာယနဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပခုံးနဲ့ တင်ပါးအကျယ်က တူညီပြီး ခါးပျောက်နေတဲ့ ပုံစံမျိုးဖြစ်ပါတယ်။ အမြင်အာရုံမှာ အပေါ်နဲ့အောက်ပိုင်းကို မျှတစေဖို့ ခါးပတ်အပြားကြီးကြီး သို့မဟုတ် ကော့ဆတ်နှင့်အတူ ဂါဝန်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။ အရောင်ကိုတော့ တစ်ရောင်တည်း မဝတ်ဆင်ပဲ အပေါ်က အနက်ရောင်ဆို အောက်က အဖြူ သို့မဟုတ် အပေါ်ဖြူ၊ အောက်အနက်ကို ဝတ်ဆင်ပါ။ တင်ပါးကို အနည်းငယ်ပိုကြီးသယောင်ဖြစ်စေဖို့ စကတ်ကားကားလေးတွေ၊ စကတ်အတွန့်လေးတွေ၊ ဖဲပြားတပ်ထားတဲ့ စကတ်လေးတွေ၊ ဘာဂျာစကတ်လေးတွေ ရွေးချယ်ပါ။
သစ်တော်သီးပုံခန္ဓာကိုယ်ရှိတဲ့ မိန်းကလေးတွေဟာ ပခုံးကျဉ်းကျဉ်းနှင့် တင်ပါးကားကားရှိပါတယ်။ ရင်သားသေးပြီး ခါးမသိသာတဲ့ ပုံသဏ္ဍာန်မျိုးပါ။ ဒီတော့ မျက်စိကိုဖမ်းစားနိုင်မယ့် အပေါ်အကျီ င်္အရောင်တောက်တောက်နှင့် အောက်ပိုင်းက အရောင်ရင့် ဂါဝန်ကို ဆင်မြန်းဖို့ ကြိုးစားပါ။ ဥပမာ အပေါ်ပိုင်းကို ရောင်စုံကျောက်လေးတွေ၊ ဇာ သို့မဟုတ် အတွန့်ဒီဇိုင်းလေးတွေနဲ့အလှဆင်ထားတဲ့ အကျီ င်္လေးတွေ ဝတ်ဆင်ပါ။ ဒါလေးတွေက ရင်ဘတ်ဧရိယာကို ပိုကျယ်သယောင်ဖန်တီးပေးပါတယ်။
ဒီလိုကိုယ့်ခန္ဓာကိုယ်နဲ့ လိုက်ဖက်မယ့် ဝတ်စုံလေးတွေ ဝတ်ဆင်ပြီးနောက်မှာ ပြီးပြည့်စုံနေစေဖို့ ဖိနပ်၊ လက်ကိုင်အိတ်၊ တခြား accessories၊ ဆံပင်ပုံသပ်သပ်ရပ်ရပ်နဲ့ ရေမွှေးဆွတ်သွားဖို့လည်း မမေ့ပါနဲ့နော်။
Previous articleအမြိုးသမီးတိုငျး သိထားသငျ့တဲ့ သှေးဆုံးခါနီး ခန်ဓာကိုယျအပွောငျးအလဲ ၅မြိုး
Next articleတစ်နေ့ကို ၈နာရီထက်ပိုအိပ်တဲ့အခါ ဖြစ်ပေါ်တတ်တဲ့ ကျန်းမာရေးပြဿနာ ၆မျိုး
Adidas ဝတျစုံတှနေဲ့ အားကစားနတျ ဘုရားမလို့ တငျစားရလောကျတဲ့ BLACKPINK အဖှဲ့
အလုပျအတှကျ အငျတာဗြူးဖွဖေို့သှားတဲ့အခါမှာ ဝတျစားဆငျယငျမှုနဲ့ပတျသကျလို့ သိထားသငျ့တဲ့ အရာမြား
ကမျးခွမှော Free Style ပုံလေးတှ ရိုကျခငျြသူအတှကျ ပို့ဈပေးနညျးလေးတှေ